ES File Explorer ပစ္စည်းဒီဇိုင်း၏မူကွဲအသစ်ကိုကူးယူပါ Androidsis
မှန်မှန်လိုက်နာသောသင်တို့အားလုံးအမှန်ပင် Androidsis ပါ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖိုင်ရှာဖွေသူဆိုတာ ES File Explorer ပါ။ ကောင်းပြီ, ဒီအခါသမယတွင်ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူမျှဝေဖို့အလွန်ကျေနပ်မိပါတယ် ES ပစ္စည်းဒီဇိုင်းဖိုင် Explorer ကို၏ဗားရှင်းအသစ်.
ဤ 4.0 ဗားရှင်း နေဆဲပြည်နယ်အတွက်လျှောက်လွှာ၏ beta ကိုGoogle ၏ Android application များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အညီချမှတ်ထားသောလမ်းညွှန်ချက်များကို၎င်း၏ဂရပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌များစွာပြောင်းလဲစေသည် ပစ္စည်းဒီဇိုင်း အမှန်တရားသည် Android အတွက်တရား ၀ င် application application store ဖြစ်သော Google Play Store မှအခမဲ့ download ပြုလုပ်နိုင်သည့် Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော file explorer ကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။
1 ES File Explorer ကဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
2 ES Material Design File Explorer ၏ဤဗားရှင်းအသစ်သည်အဘယ်နည်း။
3 ES Material Design File Explorer ဗားရှင်းသစ်ကိုဘယ်လို download လုပ်ပြီးထည့်သွင်းမလဲ။
ES File Explorer ကဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
ငါဆိုသည်ကား၊ ES ဖိုင် Explorer Android ဆိပ်ကမ်းရှိဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Material Design သို့မွမ်းမံမှုအသစ်ကိုအတည်ပြုလိုက်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုပိုမိုထိရောက်သော၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်အရာရာတိုင်းပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိုက်ဖက်ညီအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ အသစ်က Google applications များနှင့်အတူ။
ES File Explorer နှင့်အမြဲတမ်းပုံမှန်အတိုင်းရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖိုင်များကိုစီမံရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်အတွင်းသိုမဟုတ်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပ hard drive မှဖြစ်စေ USB OTG connection မှချိတ်ဆက်ထားသော pendrive မှဖြစ်စေကွန်ယက်ရှိဖိုင်များကိုပင်စီမံခန့်ခွဲသည်ဖြစ်စေ၊
အလားတူပင်ကျနော်တို့၏ဂန္လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိသည်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် ဖိုင် Explorer ကို Rootဖိုင်တွဲများနှင့် decompressor တို့ပါ ၀ င်သည် မျိုးစုံပြတင်းပေါက်ဖန်တီးပါ မတူညီသောလမ်းကြောင်းများကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်သည် ကွမ်းခြံကုန်း တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖိုင်များစွာကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ဖိုင်များကိုအခြားလမ်းညွှန်များသို့ရွှေ့ရန်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows မှလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ဖိုင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
ES Material Design File Explorer ၏ဤဗားရှင်းအသစ်သည်အဘယ်နည်း။
ငါ့အတွက် Android အတွက်အကောင်းဆုံး file explorer ဖြစ်သည့် Material Design ၏ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုသင်မြင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ LG G2 မှပြုလုပ်ထားသောကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းထက်ပိုကောင်းသည်။ လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားလုံးကိုသင်တို့အားငါပြသသည် အမှန်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းဒီဇိုင်းအသုံးပြုသူ interface အသစ်ကသင့်ကိုအရမ်းတော်ပါတယ်။
ES Material Design File Explorer ဗားရှင်းသစ်ကိုဘယ်လို download လုပ်ပြီးထည့်သွင်းမလဲ။
ယခုအချိန်တွင်ဒီ ES ပစ္စည်းဒီဇိုင်းဖိုင် Explorer ကို၏ဗားရှင်းအသစ် ၎င်းသည် apk ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ချပြီးကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တတ်နိုင်သော apk တစ်ခု ဒီ link ကနေတိုက်ရိုက် download လုပ်ပါ အောင်မြင်သော download အကြောင်းကြားစာကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Play Store ပြင်ပမှာရှိတဲ့ application တွေကိုတပ်ဆင်နိုင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တွေခွင့်ပြုထားတာကိုမမေ့ခင်မှာ မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ။ ဒီရွေးစရာကိုအတွင်းမှာတွေ့နိုင်တယ် ဆက်တင်များ / လုံခြုံရေး.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » [APK] ES Material Design File Explorer ၏မူကွဲအသစ်ကို ကူးယူ၍ တပ်ဆင်ပါ
သင့်ရဲ့ Android စက်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှင်သန်နိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်း ၇ မျိုး